WARBIXIN: UEFA Oo Ku Dhawaaqday Faah Faahinta Miisaaniyada Cusub Ee Tartamada UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Super Cup, Real Madrid Oo Sharci Cusub Lacag Badan Ku Helaysa Iyo Sida Kooxaha Loogu Kala Qoondeeyay. – GOOL24.NET
WARBIXIN: UEFA Oo Ku Dhawaaqday Faah Faahinta Miisaaniyada Cusub Ee Tartamada UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Super Cup, Real Madrid Oo Sharci Cusub Lacag Badan Ku Helaysa Iyo Sida Kooxaha Loogu Kala Qoondeeyay.
June 20, 2018 Mahamoud Batalaale
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay faah faahinta dhaqaale ee ay iyo odoroska miisaaniyada saddexda tartan ee ay maamulaan ee UEFA Champions League, UEFA Europa League iyo UEFA Super Cup iyo waliba qaabka lacagtan loo qaybin doono xili ciyaareedka cusub ee 2018/19.
Xili ciyaareedka cusub ee 2018/19 ayaa haddaba bilawday marka loo eego kulamada isreeb reebka ee UEFA Champions League iyada oo uu socdo isreeb reebka loogu soo baxayo 6 kaalmood ee ka banaan UEFA Champions league ee ka hor inta aan la samayn isku aadka heerka groupyada UEFA Champions league.
Warbixin dheer oo ay UEFA maanta oo talaado ah daabacday ayaa lagu faah faahiyay lacagta guud ee la filayo in ay soo baxayso xili ciyaareedka cusub ee 2018/19 iyo waliba qaabka loo maamulayo iyada oo UEFA sanad kasta samaysa miisaaniyada xili ciyaareedka inta aan si buuxda xili ciyaareedka loo bilaabin si koox kasta iyo cid kasta oo ku lug lihi ay u ogaato dhaqaalaha ay tahay in lagu xisaabtamo.
Qoraalka UEFA ka soo baxay ayaa lagu shaaciyay in lacagta guud ee xili ciyaareedka cusub ee 2018/19 lagu qiyaasay 3.25 BILYAN EUROS waxaana faah faahin dheeraad ah laga bixiyay qaabka lacagtan loo maamulayo oo qaybo dhawr ah iskugu jirta.
Faah faahinta UEFA maanta ka soo baxay ayaa lagu yidhi: “UEFA waxay sii daysay faah faahinta dakhli qaybinta kooxhaa ee 2018/19 ee UEFA Champions League, UEFA Eurpa League, UEFA Super Cup si la mid ah lacagta sida siman loo bixin doono ee warjiyada isreeb reebka”.
Qoraalka UEFA oo looga hadlayo qiyaasta miisaaniyada xili ciyaareedka cusub ee ay tahay in ay soo bixi doonto ayaa lagu yidhi: “Dakhliga guud ee ganacsiga 2018/19 ee UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup waxaa lagu qiyaasay €3.25 bilyan euros”.
UEFA ayaa shaacisay in €295 milyan euros loo goyn doono kharashaadka xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA taas oo ka mid ah lacagta guud ee €3.25 bilyanka Euroska ah waxaana sidoo kale qormadan lagu xaqiijiyay in boqolkiiba 7% oo u dhiganta €227.5 milyan Euros si gaar ah loogu dhigi doono lacagta sida siman kooxaha loogu qaybiyo.
Waxa kale oo ay UEFA shaacisay in boqolkiiba 6.5% laga jiri doono kubba cagta Yurub si ay kayd ugu ahaato taas oo laga goyn doono lacagta soo hadhay oo ay 2.73 bilyanka eruos laakiin boqolkiiba 93.5% lacagtan ka mid ah waxaa loo qaybin doonaa 32 ka kooxood ee ka qayb galaya UEFA Champions league, UEFA Europa League iyo UEFA Super Cup.
Qiimo ahaan waxay boqolkiiba 93.5% noqonaysaa €2.55 bilyan euros oo ah lacagta ay ku tartami doonaan kooxaha Yurub xili ciyaareedka cusub ee 2018/19 heli doonaan iyada oo koox kastaaba ka heli doonta wixii ay natiijada kulamadeeda iyo wareegyada ay soo gaadhaa u gooyaan.
Kooxaha UEFA Champions league ku tartamaya ayaa heli doona lacagta ugu badan iyada oo 2.04 bilyan euros loo qoondeeyay kooxaha 32 ka ah ee Champions League iyo UEFA Super Cupka ka ciyaari doona laakiin UEFA ayaa kooxaha tartanka labaad ee UEFA Europa League u qoyndaysay €510 milyan euros oo kaliya.
Koox kasta oo ka qayb gasha UEFA Europa League waxay heli doonntaa €50 milyan euros laakiin kooxaha wareega isreeb reebka kaga hadha UEFA Champions League iyo Europa Lagueg waxay heli doonaan €10 milyan euros.
Faah faahinta Qaabka Ay UEFA Kooxaha Champions League Ugu Qaybin Doonto Dakhiliga Soo Xarooda Xili Ciyaareedka Cusub ee 2018/19:
12 ka kooxood ee qaybta ka noqda kulamada Play-offka tartanka Champions league waxaa loo qoondeeyay 30 milyan euros iyada oo koox kastaaba si siman u heli doonta 5 milyan euros iyada oo kooxaha soo guulaysta kulamada Play-off ayna heli doonin lacago gaar ah wareegan laakiin waxay lacago ku heli doonaan in ay soo gaadhaan heerka groupyada Champions League.
Lacagta Kooxaha UEFA Champions League Heerkiisa Groupyada Soo Gaadhaa Ay Heli Doonaan:
32 ka kooxood ee ku tartami doona UEFA Champions league waxaa haddaba heerka groupyada u soo baxsan 26 ka mid ah iyada oo 6 kooxood oo kale ay ka soo gudbi doonaan wareegyada isreeb reebyada aan soo sheegnay waxaana in heerka groupyada Champions league loo soo baxo loo qoondeeyay 1.95 bilyan euros.
Halkan Kaga Bogo Boqolkiiba Qaabka Kooxaha Heerka Groupyada Champions League dakhliga loog qaybin doono:
• 25% oo u dhiganta (€488m) waxaa la siin doonaa koox kasta oo heerka groupyada UCL soo gaadha. Waxay tani la micno tahay in koox kasta oo ka mid ah 32 ka kooxood ee UEFA Champions League heerkiisa groupyada ku tartami doona la siin doono €15.25 milyan euros iyada oo aan ku xidhnayn natiijada iyo in la reebay balse waa lacagta ka qayb galka in ay heerka groupyada soo gaadheen.
• 30% oo udhiganta (€585m) waxaa kooxaha lagu siin doonaa bandhiga ay ka sameeyaan heerka groupyada Champions league waana tiro go’an. Koox kasta oo kulan heerka groupyada Champions League ah guulaysataa waxay qayb ka noqon doontaa kooxaha heli doona €2.7 milyan euros halka kulamada barbaraha loo xisaabin doono €900,000 kun oo euros iyada oo hal meel lagu shubi doono si dhex ahna loogu qaybin doono kooxaha barbaraha gala.
• 30% oo u dhiganta (€585m) waxaa lagu qaybin doonaa qiimaynta UEFA ee kooxaha yurub ee bandhigii ay soo sameeyeen tobankii sano ee ugu danbeeyay oo ah qiimaynta koox kastaaba kaalinta ay ku jirto.
• 15% oo u dhiganta (€292m) waxaa kooxaha heerka groupyada soo gaadha lagu siin doonaa si siman.
Qiimaha lacageed ee ay Kooxaha Wareega 16ka Champions League U Soo Baxaa Heli Doonaan:
• In Kooxi Ay Soo Gaadho Wareega 16ka kooxood ee Champions League waxay ku heli doontaa €9.5 milyan euros iyada oo aan xataa wali hal kulan ciyaarin waana lacagta ku qiimaysan wareegan.
• Koox kasta oo soo gaadha wareega siddeed dhamaadka UEFA Champions League waxay heli doontaa €10.5 milyan euros.
• Koox kasta oo soo gaadha wareega afar dhamaadka UEFA Champions league waxay heli doontaa €12 milyan euros.
• Koox kasta oo soo gaadha finalka UEF Champions league waxay heli doontaa €15 milyan euros taas oo la micno ah in labada kooxood ee finalka soo gaadhaa ay 30 milyan euros wada jir u heli doonaan iyaga oo aan ciyaarin finalka UCL.
• Kooxda koobka UEFA Champions league ku guulaysataa waxay 15 kii milyan euros ku darsan doontaa 4 miyan euros taas oo la micno ah in ay 19 milyan euros jeebka ku shuban doonto halka kooxda laga guulaystaa ay heli doonto 15 milyan euroska ay wareegan ku soo gaadhay.
• Labada kooxood ee uu soo baxa UEFA Super Cup oo kala noqon doona kooxda ku guulaysata UEFA Champions league iyo UEFA Europa league waxay heli doonaan €3.5 milyan euros iyada oo kooxda ku guulaysata UEFA Europa League ay ku darsan doonto €1 milyan euros oo dheeraad ah.
UEFA ayaa shaacisay in la sameeyay nooc qiimayn cusub ah taas oo kooxaha loogu salayn doono bandhiga tobankii sano ee la soo dhaafay ay ka sameeyeen tartamada Yurub ioy waliba dhibcihii ay ka soo heleen oo laysku geeyay waxaana jira dhibco dheeraad ah oo lagu helayo in kooxi ay ku soo guulaysatay koobabka Yurub.
Waxaana jirta lacag 585 milyan euros ah oo kooxaha Yurub loogu qaybin doono kaalinta ay kaga jiraan qiimaynta UEFA iyada oo kooxda ugu qiimaynta hoosaysaa ay heli doonto hal saami oo u dhigma 1,108 milyan eruos iyada oo saami kasta oo sare u kaca lagu dari doono, sidaa daraadeed, kooxda UEFA ka haysata qiimaynta ugu saraysa oo Real Madrid ah ayaa heli doonta qiimaha ugu sareeya oo 35.46 milyan euros ah.
Ugu danbayn waxaa jirta lacag dhan 292 milyan euros oo loo yaqaan Market Pool waana lacag ay koox kastaaba saami kaga heli doonto kulamada xuquuqda baahinta TV-ga ee min heerka groupyada Champions League ilaa finalka iyada oo wareeg kastaaba uu lahaan doono saami gaar ah.
Diyaarintii: Mahamoud Batalaale.